धोकेबाज गर्लफ्रेन्डको ५ यी बानी र सङ्केतहरू । थाहापाँउनुहोस् —
काठमाडौँ । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल एकदमै एक्टिभ छ । सामाजिक सञ्जाल मा झुम्ने युवायुवतीहरूको कमी छैन । अझ सामाजिक सञ्जाल मा पनि फेसबुक पछिल्लो समय का युवा युवतीहरूलाई माया गाँस्न सजिलो माध्यम बनेको छ । फेसबुक बाट सुरु भएको कुराकानी बाट मायामा परिणत भएको माया मा कत्तिको इमानदारी हुन्छ । कहिलेकाहीँ यसरी सुरु भएको सम्बन्ध केही दिन र समय को लागि मात्र रहन्छ । धेरै दिन चल्दैन ।
यो पनि पढ्नुहोस ! भाइरल कमला घिमिरेको पहिलो गीत सार्वजनिक (भिडियो सहित)
काठमाडौँ । पहिलो दोहोरी गीत बाट एकाएक भाइरल बनेकी धादिङकी कमला घिमिरेको स्वरमा रहेको उनको पहिलो म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । कमलाले गाएको पहिलो गीत शुभारम्भ डिजिटल म्युजिक प्रालिको लगानीमा बजारमा आएको हो । कमला घिमिरे सँगै अमृत सापकोटाले उक्त गीतमा गीतमा आवाज दिएका छन्।अमृत सापकोटालेनै उनलाई मिडियामा ल्याएका थिए।
सानै उमेरमा उनले गाएको गीतले लाखौँ दर्शक नजिकिएका थिए।१ करोड भन्दा बढीले दोहोरीने हेरिसकेका छन् कमला घिमिरेको। कमला घिमिरेको उक्त गीतको प्रस्तुत कर्ता भने शम्भु कुँवर हुन्।चर्चित सर्जक रमेश बिजीको शब्द र अर्का चर्चित गायक तथा सर्जक खेम सेन्चुरीको लय रहेको गीतमा नेपालका चर्चित चर्चित मोडलहरूले नृत्य समेत गरेका छन्।
शङ्कर बिसीको निर्देशन रहेको भिडियो को छायाङ्कन भने दुर्गा पौडेल र सुरेश श्रेष्ठले गरेका हुन्।भिडियो सम्पादन भने विकास ज्ञवालीले गरेका छन्।भिडियो अहिले निकै भाइरल भएको छ। भिडियो हेरौँ :
किन बोल्दैनन् बलिउडका यी दुई स्टार शाहरुख र अजय? कारण यस्तो ।
अब चलचित्रमा पनि टुइन्स गर्ल प्रिन्सी-प्रिज्मा [ भिडियो ]